Clickfunnels Shirt uphondo - Funnel Of The Day
Njengoba ungasebenzisa funnels yakho ukudayisa imikhiqizo ngokomzimba, ungasebenzisa ukuba ithengisa izimpahla.
Siyalungiselela Clickfunnels ihembe uphondo kuyindlela enhle yokubonisa umkhiqizo wakho endaweni elinganiselwe ekhasini lokubikezela.
Ungenza umnikelo bahle ngokwengeziwe ngokungeza ezinye imininingwane namanzi ezifana nokwakhiwa ukusweleka countdown, nokubuyekeza okuvela amakhasimende wanelisekile.
Lezi funnels sikuvumela ukudala umnikelo usebenzisa amathikithi support ezisebenza izaziso ze-imeyili, ukuze ukwazi ukwakha uhlelo yokukhangisa lapho amakhasimende akho kungaba umvuzo ngokuya ekuqaleni ukudayiswa.
Njengoba ithuluzi lokumaketha uya, lezi funnels ziwusizo kakhulu!
P.S. ­ Lena sipho eyodwa isikhathi 14 sezinsuku ezingu…